स्तन क्यान्सर भएकाले नेपालमै स्तन फेर्न सक्ने प्रविधि
काठमाण्डौं । ललितपुर हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा वुमन चेम्वर अफ कमर्सका सदस्यहरुलाई स्तन क्यानसरसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिइएको छ । स्तनपान सचेतना महिनाको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा मिडिया, हेल्थ र ह्याप्पीनेस मोटिभेसनल ट्रेनर सिमोन नेउपानेले स्तन क्यान्सरसँग जुध्न अपनाइने मेडिटेसनको प्रदर्शन गरेका थिए । अस्पतालका सर्जिकल अन्कोलोजी विभाग प्रमुख डा. कपेन्द्रशेखर अमात्यले स्तन क्यानसरबारे सहभागीलाई विस्तृतमा जानकार।ी गराएका थिए । उनले स्तन क्यान्सर भएको जानकारी समयमै चिकित्सकलाई गराउन सकिए स्तन काटेर फल्न बाध्य नहुने प्रष्ट्याए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले क्यान्सरसँग लडिरहेका व्यक्तिहरुको सहायताका समाजका सबै तह र तप्का एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
वुमन चेम्वर अफ कमर्सकी अध्यक्ष डा. अञ्जन शाक्यले कामकाजी र व्यवसायीक महिलाहरुको क्यान्सर रोकथाम स्वास्थ्य जाँचका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमको महत्व रहेको प्रकाश पारिन् ।
वुमन चेम्बर अफ कमर्सकी हेल्थ कमिटी संयोजक स्वरुपा श्रेष्ठले क्यान्सर रोगबारे मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनचेतना विस्तार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
उनका अनुसार वुमन च्याम्बरले क्यान्सर रोगको रोकथाम र उपचारबारे नेपाल क्यान्सर अस्पताल, च्याम्बर अफ कमर्स, रोटरी र लायन्स क्लबजस्ता सामाजिक संघसंस्थासँगको सहकार्य गरिरहेको छ ।
बुधबार २१ कार्तिक, २०७५ ११:२९:०० मा प्रकाशित